Saadaalinta dhaqaalaha dalka oo rajo xun laga muujiyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Saadaalinta dhaqaalaha dalka oo rajo xun laga muujiyey
La cusbooneeyay måndag 15 april 2013 kl 12.12
La daabacay måndag 15 april 2013 kl 10.01
Wasiirka dhaqaalaha ee dalkan Iswiidhen Anders Borg oo saaka soo ban-dhigay miisaaniyaddii gu’ga ayaa hoos u dhigay kobaca dhaqaalaha mustaqbalka dalka 2,2% sannadka 2014, halkii horay looga saadaalinayey 3%.
Ugu horeeyn sannadka 2015 ayay dawladdu saadaalinaysaa kor u kac dhanka kobaca dhaqaale , halka dhanka kale la fileyo saadaalin ka wanaag-san kolka loo barbar-dhigi middi la filayey ee bishii diseembar. Welwelka dhaqaale ayuu ugu wacan yahay xaaladda dhaqaalaha cakiran ee weli ka aloosan waddammada ku midoobey isticmaalka lacagaha euro, sida uu shir jaraa’id maanta ku sheegay sheegay Anders Borg:
- Weli waxaa ka socda xaalad dhaqaale cakiran waddammada euro-ga iyada oo aan saadaalineyno iney weli jiraan welwel laga qabo dhanka dhaqaalaha. Waa mid sahlan in la saadaaliyo xaaladda ey ku sugan yihiin waddammada aan deriska nahey.
Ugu horeyn sannadka 2015 ayaa la filayaa inuu kor u kaco kobaca dhaqaale sida dawladdu aamin-san tahay, halka dhanka kale uu dalkani weli ku sugan yahay xaalad dhaqaale wanaag-san kolka loo barbar-dhigo waddammada Yurub intooda kale, sida uu qabo Anders Borg:
- Iswiidhen waxay ku sugan tahay kaalin adag, waxaannu leenahey miisaaniyad sarreeysa ee lagu maal-geliyo howlaha adeegga bulshada, kolka loo barbar-dhigo waddammada kale. Xaaladda lacag-keydintayadu waa mid sarreeysa, deeymaha la innagu leeyahey waa kuwo ka hooseeya waddammada kale. Sidoo kale waxaannu leenahay tamar aan ku sii socon karno in muddo ah ee dhanka dhaqaalaha.
Dhanka kale heerka shaqa la’aanta ayaa ku sii sugnaan doonta heer ka sarreeysa 8% dhowr sannadood, sida dawladdu qabto, iyada oo caqabadda ugu ballaaran ee iminka jirtaa tahay shaqa-la’aanta ku habsatay dhallin-yarada:
- Waxaan saadaalineynaa in shaqa la’aantu kor uga kici doonto 8% oo ey gaari doonto 8,3% sannadkan iyo 8,4% sannadka foodda innagu soo haya. Iyada oo aan saadaalineyno in qeybta dambe ee sannadka 2014 la arki doono saansaamo ey shaqa-la’aantu hoos ugu dhici doonto.
Sidaa daraadeed ayay dawladdu ay halkeedii uga dhabba-xaareysaa iyada oo xoogga lagu saareyo miisaaniyada gu’ga siyaasaddeedii la xiriirtay dhabbada dhanka shaqada. Middaasina oo lagu miisaaniyad-gelineyo saddex bilyan oo koron sannadkan iyo midka xiga. Halka lacagtaa badankeed la gelin doono sannadkan. Hadday noqon lahayd howlaha aqoon-kororsiga suuqa shaqada, iyo sidoo kale abuuridda goobo hor leh ee jaamicadaha wax lagu barto:
- Midda ugu horeeysa waxay tahay in la adkeeyo siyaasadda dhabbada shaqada iyo sidii lagu abuuri lahaa goobo shaqo ee hor leh. Middaa labaad oo ah sidii lagu adkeeyn lahaa dhabbada aqoonta ee iskuulaadka, kuwaasi oo noqon kara sidii kor loogu qaadi lahaa saacadaha tacliinta ama lagu adkeeyn lahaa nidaamka barashada xirfadaha, sida uu sheegay Anders Borg, wasiirka dhaqaalaha ee dalka Iswiidhen.
Isha/ PK regeringen.se